Ngaba ukunganyanzelwa kweNyani kunokukuchaphazela njani ukuThengisa okuPhembelelayo? | Martech Zone
I-COVID-19 iyitshintshile indlela esithenga ngayo. Ngobhubhane ogcwele ngaphandle, abathengi bakhetha ukuhlala ngaphakathi kwaye bathenge izinto kwi-intanethi endaweni yoko. Kungenxa yoko le nto abathengi bejongela kwiimpembelelo ngakumbi nangakumbi ngendlela yokwenza iividiyo kuyo nayiphi na into ekuzameni kwilipstick ukuya ekudlaleni imidlalo yevidiyo esiyithandayo. Ukufumana okuninzi kwiziphumo zobhubhane kwintengiso yempembelelo kunye namaxabiso, yabona isifundo sethu samva nje.
Kodwa oku kusebenza njani kwezo zinto kufuneka zibonwe ukuze zikholwe? Ukuthenga i-lipstick oyikhethileyo kwivenkile kukude kakhulu eku-odoleni ukuba ungaboni. Uyazi njani ukuba iya kujongeka kanjani ebusweni bakho ngaphambi kokuthenga? Ngoku kukho isisombululo kunye nabashukumisayo abasibonisa indlela ngokuzonwabisa, okwenyani kunye nokuzonwabisa.
Okwangoku, sonke sibonile Inyaniso eyazisiweyo (AR) ngandlela thile. Mhlawumbi uqaphele ukuba abachaphazeli babelana ngeevidiyo zabo benxibe iindlebe zedigital puppy iindlebe kunye neempumlo, okanye izihluzi zobudala ebusweni babo. Unokukhumbula iminyaka embalwa eyadlulayo xa wonke umntu wayesebenzisa iifowuni ukugxotha abalinganiswa bePokemon kuyo yonke idolophu. Yiyo iAR. Kuthatha umfanekiso owenziwe ngekhompyuter kwaye uyibeke kwifowuni yakho, ukuze ubone iPikachu imi phambi kwakho, okanye uguqule indlela obonakala ngayo ubuso bakho. I-AR sele idumile kwimidiya yoluntu ngenxa yexabiso layo lokuzonwabisa. Kodwa zininzi kakhulu izinto ezinokubakho kwilizwe le-ecommerce. Ungathini xa ubona loo mlomo womlomo ungakhange uphakame ebhedini yakho? Ungathini xa ungazama ukubonakala okwahlukileyo kukhuseleko kunye nokhuseleko kwikhaya lakho, ngaphambi kokufikelela kwikhadi letyala? Nge-AR, ungayenza yonke loo nto kunye nangaphezulu.
Iimpawu ezininzi ziyaxhuma kule teknoloji, ekulindeleke ukuba iqhubeke iphucula. Ukusuka ekubambeni ukuya kwipolishi yesikhonkwane ukuya kwezihlangu, abathengisi bafumana iindlela ezintsha zokusebenzisa obu buchwephesha bunomdla. Endaweni yeendlebe ezintle zenjanana, ungazama iiglasi ezimbini okanye ezilishumi elinambini. Esikhundleni semvula kunye namafu ajikelezayo phezu kwentloko yakho, unokuzama umbala omtsha weenwele ngobukhulu. Unokude uhambe uhambe ngebhanti leenyani. Kwaye ukubonwa kukhula ngokwenyani ngalo lonke ixesha.
Izilingo ezizenzekelayo, njengoko le ndlela intsha ibizwa njalo, iyonwabisa kwaye mhlawumbi ingamlutha umthengi ophakathi. Kuqikelelwa ukuba izigidi ezingama-50 zabasebenzisi benethiwekhi yoluntu baya kusebenzisa i-AR ngo-2020. Ukuqala, iinzame zabo ziya kufikelela kumakhulu ezigidi zabalandeli kumzi mveliso wefashoni kunye nobuhle, beqhuba abathengi ngokuthe ngqo kwiiapps zabo abazithandayo ukuba bazidlalele. Iimpawu ezingakhange zibambelele kwi-AR okwangoku ziya kuzifumana zikwimeko engeloncedo njengoko abachaphazeli bethumela abalandeli babo emihlambini ukuya kuvavanya itekhnoloji yakutshanje.
Njengoko itekhnoloji ye-AR iphucuka, abachaphazeli abayi kufuna nokuba babenento yokunxiba ukubonisa indlela abaya kujongeka ngayo kuyo, oko kuthetha ukuba umxholo ungaphezulu ngokukhawuleza. Khawufane ucinge ngamathuba njengeqela eliphembelela umboniso wefashoni ebonakalayo. Iziganeko ezikhulu ezikwi-Intanethi zinokwenziwa ngokujikeleza umxholo weqela labaphembeleli ndizama iimpahla ezifanayo ukubonisa indlela eziza kubonakala ngayo kwiimo ezahlukeneyo zomzimba kunye nobukhulu. Zonke zinokulungiswa kungekho namnye kubo owakha washiya amagumbi abo okuhlala.
Kodwa iinzame zefashoni kunye nobuhle ayizizo kuphela ezisebenzisa i-AR. Njengesixhobo esinamandla sedemo, i-AR yimpendulo yabaphembeleli ekuboniseni iimveliso ezifuna ukujongwa ngevidiyo. Oku kunokuthetha ukubonisa usetyenziso oluchanekileyo lweemveliso zokucheba iinwele, kodwa isenokwanda nakwimimandla efana nomzi mveliso wokudlala, njengokubonisa imidlalo yevidiyo. Kwimizi-mveliso yekhaya, i-IKEA isungula usetyenziso olubizwa ngokuba yi-IKEA Place, eya kuthi ivumele abasebenzisi ukuba bazame ngefenitshala eyahlukeneyo emakhayeni abo ngaphambi kokuba bayithenge, bayigoduse, kwaye baye kumzamo wokuyidibanisa yonke.
Cinga iminyhadala ye-Intanethi apho abachaphazeli bembonakalo babonisa ukuba yenziwa njani ngokuthatha ukhenketho lwamakhaya abo kunye nokuziphatha ngokuvota malunga netafile entsha yokubeka kumagumbi abo okutyela. Kukho indawo eninzi yokuyila njengetekhnoloji yeentyatyambo.
Sele siyazi ukuba i-YouTube iqhume ngevidiyo ezivela kubaphembeleli njengabalandeli abanqwenela iintlobo ezintsha zomxholo. Phantse iividiyo ezibhiliyoni ezintlanu zibukelwa ngemini kwi-YouTube ngababukeli abangaphezu kwezigidi ezingama-30. I-AR ngokuyimfuneko luphuculo kwifomathi. Sisizukulwana esilandelayo sentengiso. Kwaye njengoko amathuba e-AR esanda nangaphaya kokuthengisa kwizicelo zehlabathi zokwenyani ezinje ngemfundo kunye nokufunda ngokudibeneyo, itekhnoloji iya kuqhubeka ukuba ngcono. Iimpawu ezikhawulezayo zisebenzisa ithuba lokuthengisa kunye nefuthe lokuzenzela zona, zingcono kunokuba ziya kuba njalo.
Ukufunda ngakumbi malunga nentengiso yempembelelo x AR kunye nendlela enokuthi ihambise ngayo uphawu lwakho kwinqanaba elilandelayo, ungaqhagamshelana nathi kwaye umntu ovela kwiqela lethu uya kufikelela ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Nxibelelana ne-A & E
Malunga ne-A & E
I-A & E yiarhente yedijithali eyeyona inkulu ipotifoliyo yomthengi yeenkampani zeFortune 500 ezinje nge Wells Fargo, J & J, P&G, kunye neNetflix. Abasunguli bethu, u-Amra no-Elma, ngabaphembeleli be-mega nabangaphezulu kwesigidi se-2.2 sabalandeli; Bona ngakumbi malunga ne-A & E kwi Forbes, Umabonwakude weBloomberg, Financial Times, Inc., yaye IVidiyo yoShishino ngaphakathi.
tags: a & eAmra noElmaarNyaniso eyongeziweyoUbuhleifashoniikea indawoukuthengisa okunempembeleloifuthe lokuzamaukuzama ngokuqinisekileyoukuzama okuqinisekileyoyoutube
UNks Beganovich ukhokela I-A & EIinzame ekwakheni uluhlu lwamaqabane adumileyo kwihlabathi kunye nabathengi. Indawo yakhe yobungcali ibandakanya ukuchonga iindima ezinokudlalwa yi-A & E yeentlobo ngeentlobo zeemveliso kumashishini ahlukeneyo, kunye nokuphuhlisa imigaqo kunye nobubanzi bezo ntsebenziswano.